यौनशक्ति बढाउने केहि प्राकृतिक तत्वहरु [महिला–पुरुष दुवैका लागि] • Janaboli
बढाउने केहि प्राकृतिक तत्व हरु
हरिश , कुरिनटार
५. चकलेटः पूर्ण प्राकृतिक नभए पनि यस शीर्षकमा चकलेट चर्चा महत्वपूर्ण छ । चकलेटले मस्तिष्कमा सेरोटोनिक भन्ने रासायनिक पदार्थको मात्रा बढाउन मद्दत गर्दछ । सेरोटोनिनले खुसी, सन्तोष र आनन्द अनुभूत गराई मानसिक शान्ति प्रदान गर्दछ । गाढा खैरो रगंको चकलेटमा प्रशस्त मात्रामा एन्टी अक्सिडेन्ट हुने हुनाले यसको प्रयोग अत्यन्त राम्रो मानिन्छ । यस्तो मानसिक वातावरणले सम्भोगका वेला यौन आनन्दको प्राप्ति बढाउने हुँदा चकलेटलाई यौनवद्र्धक तत्व मानिन्छ । माथि उल्लेखित सबै प्राकृतिक यौनवद्र्धकहरु प्रयोग गर्ने मात्रा ठीक हुनुपर्दछ । बढी वा कम प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन, तर नियमित भने हुनुपर्दछ । प्राकृतिक यौनवद्र्धक तत्वहरुको प्रयोग सँगसँगै मानिसको आहार, व्यवहार, जीवनपद्धति र मानसिक स्थिति राम्रो रहेमात्र यिनीहरुको पूर्ण प्रभाव देख्न सकिन्छ । प्राकृतिक तत्वबाहेक सुख्खा योनिलाई चिप्लो र द्रवित बनाउने रासायनिक तत्वहरु पनि महिलाको योनिमा प्रयोग गरेर यौन आनन्द वृद्धि गर्न सकिन्छ । तर तिनको विस्तृत चर्चा यस आलेखको मूल विषयभन्दा बाहिर पर्ने हुनाले अहिलेलाई यत्तिनै । डा. सुवोधकुमार पोख्रेलको पुस्तक ‘सृष्टिको रोमान्स’बाट